Madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kula kulmay Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka iyo guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed.
Kulankaan ayaa waxaa ay uga wada hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka isbedeladii dhacay iyo wada-shaqeynta Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay Madaxweynaha ka wada hadleen dhowr arrimood oo kala ah, guud ahaan arimaha diyaasadeed iyo marxlada kala guurka ah ee dalka uu maraayo, Arimaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, wax ka qabashada Fatahaadaha ku soo noq noqday deegaanada Hirshabeelle oo dhibaabto ba’an ku haayo bulshada.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka qeybna ka ahaa kulanka ayaa yiri” Madaxweynaha JF Soomaaliya iyo aniga iyo gudoomiyaha Barlamanka Hirshabelle oo ka wada sheekeystay xaalada Dalka, balse uusan bixin faah faahin intaasi ka dheer.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay madaxtooyada Soomaaliya laga dareemayaa mashquul xooggan tan iyo markii Xildhibaannada Golaha Shacabka ay xilkii ka qaadeen Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxaana socda shirar looga hadlayo Magacaabista Ra’iisul Wasaare Cusub.
Tags: Baarlamaan, Farmaajo, guddoomiye, hirshabelle, kulan xasaasi
UPDATE: Mareykanka oo 12 kun oo askari ah kala baxaya dal ku yaalla Yurub (SABAB)!
Tirada dhimashada ee Coronavirus ee Mareykanka oo kor u dhaaftay ‘150 kun’ oo Kiis